Ntuziaka Blog Tipping: My Blog Coach nke Shonnie Lavender | Martech Zone
Na nso nso a ka m nyere Ntuziaka blog nye Shonnie Lavender n'ihi na ya kediegwu blog, My Blog Nchịkwa. Shonnie nabatara ndụmọdụ ahụ ma malite ịrụ ọrụ ozugbo iji mejuputa ụfọdụ mgbanwe ndị ahụ. Ihe kacha dị egwu bụ nkụnye eji isi mee peeji ya.
Nke a bụ isiokwu 'Tupu' nkụnye eji isi mee:
Nke a bụ ihe ngosipụta 'Mgbe':
Olileanya, ị ga-ahụ etu ịkpọ eserese ọhụụ si dị mma! Chaị! Lee mgbanwe. Foto ahụ dị mma ma na-akpọkwa ma mbinye aka na-agbakwunye na klas nke ụma. Ihe omuma Shonnie abiala ugbua - nhazi ohuru a buru ezigbo enyi. Ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na-ama jijiji na itinye foto nke onwe ha na blọọgụ ha. Cheta, foto a abụghị nke gị! Ọ bụ maka ndị folks na-agwa gị okwu site na blọọgụ gị!
Ezigbo ọrụ Shonnie! Biko mee ka anyị mara etu uto gị dị!
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ị nweta blọọgụ gị, chọpụta nke m Nbudata Blog.
Jul 21, 2007 na 7:15 PM
Nke ahụ bụ n'ezie mmelite. Ugbu a, m ga-agbanwe ụdị edemede ahụ gaa ihe dị jụụ, dị mfe.